Ifowuni yokusonga yakwaSamsung iza kufika kwakamsinya kunokuba bekulindelwe | I-Androidsis
Kangangeenyanga Siyazi ukuba i-Samsung isebenza kwifowuni esongekayo. Imodeli okwangoku eyabhaptizwa njengeGreen X, nangona igama layo lokugqibela liza kwahluka. Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo kwathiwa umnxeba uza kuziswa ekuqaleni konyaka olandelayo. Kwaye ngoku, ngokweengxelo ezivela kwinkampani uqobo, ukumiliselwa kwayo kuya kuba kufutshane kunokucinga.
Lo nto Imakethi sele ilungiselela le fowuni intsha yakwa-Samsung. Ifowuni ebonakala ngathi yeyoluhlu olutsha eziza kuyilwa yinkampani, ke iya kuba kudidi olwahlukileyo kwezinye iimodeli zenkampani yaseKorea.
Iinkcukacha eziza kuthi malunga nale modeli kukuvuza. Kuba inkampani ifuna ukugcina yonke into iyimfihlo kwaye iphantsi kolawulo. Isigqibo esiqondakalayo, kuthathelwa ingqalelo ukuba iya kuba yeyokuqala ukusonga ifowuni kwintengiso. Ke ulindelo luphezulu.
Ukuba bhetyebhetye, ukuhlala ixesha elide kunye nokumelana nefowuni zizinto ezintathu eziphambili kwimpumelelo yazo kwintengiso. Into eyaziwayo yi-Samsung, ke iqinisekile ukuba ingqalelo ekhethekileyo ihlawulwe kwezi zinto xa uvelisa isixhobo. Ukongeza ekwenzeni uvavanyo oluninzi malunga noku.
Okwangoku, akukho mhla unikiweyo wokufika kwale modeli. Ngexesha lokugqibela into iviwe yayiza kwenziwa ngoJanuwari, kwi-CES 2019. Ifowuni apho i-Samsung iza kukhaba isiphelo esiphezulu kunyaka olandelayo.
Kuya kufuneka silinde inkampani ukuba ityhile iinkcukacha ezingakumbi ngayo. Unikezwe ukuba ulindelo ngaphambi kokuba ifowuni yokusonga ye-Samsung iphezulu. Ke sinethemba lokwazi ngakumbi malunga nokuqaliswa kwayo kunye nomhla wentetho kwiiveki ezimbalwa. Ngaba ujonge phambili kule modeli?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Iselfowuni esongwayo yeSamsung iza kufika kwangoko kunokuba bekulindelwe
I-Twitter Lite ifikelela kumazwe amatsha angama-21 aneempawu ezintsha